आवश्यकता भन्दा धेरै माया गरेमा पनि ब्रेकअप हुन सक्छः रिसर्च
आजकालका युवायुवतीहरु छिटो प्रेममा पर्छन् र त्यो भन्दा छिटो नै अलग अलग हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
आजकालका युवायुवतीको प्रेम सम्बन्ध र ब्रेकअपको कारणहरु खोज्न हालसालै गरिएको एक नयाँ रिसर्चमा कैयौं आश्चर्यजनक तथ्यहरु अगाडी आएको छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार प्रेम र ब्रेकअप सँग सम्बन्धित कारणहरु पत्ता लगाउनको लागि यो रिसर्च गरिएको थियो ।
यस रिसर्चको रिर्पोटमा यो तथ्य अगाडी आयो कि दुई मानिसहरुको बिचमा आवश्यकता भन्दा धेरै प्रेम भयो भने उनीहरु अलग अलग हुने ठूलो सम्भावना रहन्छ ।
मिचिगन युनिभर्सिटीका ह्युमन साइकोलोजी डिपार्टमेन्ट द्धारा प्रकाशित गरिएको यो रिसर्चमा प्रेमलाई नै ब्रेकअपको कारण बताइएको छ ।
विशेषज्ञहरुको कुरा मान्ने हो भने युरोप र अमेरिका जस्ता देशहरुमा यो तथ्य अगाडी आयो कि धेरै जसो सम्बन्ध विच्छेद हुनाको एक ठूलो कारण पार्टनरको प्रेमलाई लिएर केही धेरै नै संवेदनशिल हुनु रहेको छ ।
खासमा जब एक पार्टनर धेरै प्रेम गर्छ भने उसले आफ्नो पार्टनरले पनि बदलामा त्यस्तै धेरै मायाको इच्छा राख्ने गर्छन् । यदि दोस्रो पार्टनरले यो कुरालाई ख्याल गर्न सकेन भने सम्बन्ध मुस्किलमा पर्न थाल्छ । यो रिर्पोटको अनुसार यो स्थिति दुवैको लागि खतरनाक हुन्छ ।
यसमा एक पार्टनर ले यो सोच्छ कि उसको प्रेमको कुनै मुल्य छैन र अर्कोले यो सोच्छ कि उसको स्वतन्त्रता छिनिएको छ । यस्तो अवस्था आउनसाथै दुवैले आफ्नो लागि केही नयाँको खोजिमा लाग्छन् ।
आजकाल कसैलाई पनि यो कुरा मन पर्दैन कि कसैले उनीहरुको स्वतन्त्रतामा रोक लगाओस । माया प्रेम गर्नु एक अलग कुरा हो तर तपाई कसैलाई पनि बोझ बन्न सक्नुहुन्न ।
प्रेम सम्बन्ध दिगो बनाउन के गर्ने त ?
यदि तपाईको पार्टनर तपाईको प्रेम प्रति आफ्नो मन मुताबिक प्रतिक्रिया दिइरहको छैन् भने उसँग राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस । हतारमा कुनै निर्णय नलिनुहोस ।
आफ्नो सम्बन्धलाई समयसँगै विकास गर्ने कोशिस गर्नुहोस । धेरैजसो तपाई समयसँगै धेरै बदलिनुहुन्छ तर पार्टनरसँग तपाईको आशा त्यहि रहन्छ जुन सम्बन्धको सुरुवातमा थियो । यसैले समयसँगै दुवैले आफ्नो पार्टनर सँग सम्बन्धमा आइरहेको परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्दै रहनुहोस ।
प्रेम धेरै आवश्यक हुन्छ तर यो सोच्नुहोस कि तपाईको सम्बन्ध कता जाँदैछ । के सम्बन्धसँगै तपाई अगाडी बढिरहुनुभएको छ वा फेरी त्यँही हुनुहुन्छ जहाँ सम्बन्ध सुरु गर्दा हुनुहुन्थ्यो ।
के माया प्रेम तपाईमाथि केही यस्तो तरिकाले हावि भएको छ कि तपाईको पहिचान नै हराएको छ ? यदि यस्तो हो भने उक्त सम्बन्धलाई सम्हाल्नको लागि अहिलेदेखी नै सोच्न सुरु गर्न थालिहाल्नुहोस ।
यस कुरामा ध्यान दिनुहोस कि कँही यो सम्बन्ध नै तपाईको डिप्रेशनको कारण त बनेको छैन् । यी सबै कुराहरुबाट जति तपाई प्रभावित हुनुहुन्छ उति आफ्नो पार्टनर पनि भएको हुन सक्छ । यस्ता कुराहरुले एक दिन यति समस्या ल्याउन सक्छ र तपाईलाई अलग हुने विचार मनमा आउन सक्छ । त्यसैले समय छँदै सम्हालिनुहोस ।